Toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaan ka caawinaynay macmiil inuu ku sameeyo guurguur adag WordPress. Macmiilku wuxuu lahaa laba shey, oo labaduba caan ku noqday ilaa heer ay ahayd inay kala qeybsadaan meheradaha, astaamaynta, iyo waxyaabaha ay ka kooban tahay oo loo kala saaro goobo kala duwan. Waa hawl!
Qaybta ay hadda haystaan ​​waa la sii joogayaa, laakiin domainka cusubi wuxuu ka kooban yahay dhammaan waxyaabaha la xiriira sheygaas… sawirrada, qoraallada, daraasaadka kiisaska, soo degsashada, foomamka, saldhigga aqoonta, iwm. 'ha seegin hal hanti.
Rankmath SEO - sheygan SEO-ga ah ee khafiifka ahi waa neef hawo nadiif ah wuxuuna ka dhigayaa liistadayda Waxyaabaha ugu Wanaagsan ee WordPress suuqa. Waxay dib-u-jeedin u tahay qayb ka mid ah bixinta waxayna xitaa soo dejin doontaa xogta Hanuuninta haddii aad u soo haajirto.
Dhibaato ayaa jirta taas, in kastoo. Kawaran haddii aad qaybisay xiriiriyeyaal iyo ololeyaal leh xayeysiin loogu talagalay raadinta ololaha ama gudbinta? Bogaggaas si sax ah dib ugama jeedin doonaan Waxaa laga yaabaa in URL uu yahay:
Sababtoo ah waxaad qortay ciyaar sax ah, URL-kani meelna uma jeedin doono! Marka, waxaa laga yaabaa inaad isku daydo inaad ka dhigto hadal caadi ah oo aad ku darto cinwaanka cinwaanka URL:
Taasi waxay hubin doontaa in kaliya heerka galka koowaad uu si sax ah u wareegi doono. Hadda dhibaatada labaad… sidee ku heli doontaa macluumaadka querystring ee lagu qabtay bogga cusub haddii dib-u-habeyntaada aysan ku jirin? Hagaag, tibaaxaha joogtada ahi waxay leeyihiin xal weyn oo sidoo kale:
Tags: dib udhigistadib u wareejindib u habeynta pluginregexmuujinta joogtada ahplugin WordPress